Madoobe oo waqti kooban heysta in uu ku soo Magacaabo Golihiisa Wasiirada * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madoobe oo waqti kooban heysta in uu ku soo Magacaabo Golihiisa Wasiirada
By MAREEG	 On Apr 15, 2016
Kismaayo ( Mareeg)-Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo la hadlay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in muddo kooban ay ka harsantahay waqtiga la siiyay Madaxweynaha maamulkaas Axmed Madoobe in uu ku soo dhameystiro golaha Wasiirada maamulkaas.
Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland ayaa xusay in wax aan ka badneen muddo bil ah ay ka harsantahay in uu ku soo dhameystiro Madaxweynaha Jubbaland Golihiisa Wasiirada.
Sidoo kale guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland ayaa ka meesha ka saaray in uu jiri doono muddo kororsi kale ee loo oogolyahay Madaxweynaha maamulkaas.
Axmed Madoobe ayaa waxaa horay caqabad ay uga heysatay dhameystirka Wasiirada maamulkiisa qaar ka mid ah Odayaasha Jubbooyinka iyo Gedo oo oo muddo uu shir uga soconayay Magaalada Kismaayo, walow haatan ay heshiis wada gaareen.
International Press Institute (IPI) call on Pakistan to release Hamid Mir shooting report
Madaxweyne Xasan oo Ethiopia kaga qeybgalaya shir madaxeed arrimaha amniga Afrika